Soo dejisan AVG AntiVirus 5.9.4.1 – Android – Vessoft
Bogga rasmiga ah: AVG AntiVirus
Wikipedia: AVG AntiVirus
AVG AntiVirus – softiweeraal fayras ah oo ka ilaaliya aaladdaada barnaamijyada waxyeellada leh iyo fayraska. AVG AntiVirus wuxuu baaritaan ku sameeyaa feylasha, codsiyada iyo qeybaha kala duwan ee aaladda lambarka xaasidnimo wuxuuna soo bandhigayaa in meesha laga saaro macluumaadka cudurka dhamaadka kormeerka. Software-ka wuxuu oggol yahay inuu meel fog ka maareeyo aaladda iyo go’aaminta goobta aaladda lumay haddii ay dhacdo tuugo. AVG AntiVirus wuxuu siiyaa badbaado aamin ah oo aamin ah ee shabakadaha internetka. Software-ka ayaa awood u siinaya inuu la socdo batteriga ama ilaha xusuusta ee aaladda isla markaana meesha laga saaro geedi socodka kala duwan ee gaabinaaya nidaamka. AVG AntiVirus wuxuu kaloo taageeraa sameynta maseerka si loo tijaabiyo aaladda waqti cayiman ama codsi adeegsade.
Nidaam awood leh oo ilaalin ah
Cusboonaysiinta joogtada ah ee xogta xogta fayraska
Hubinta faahfaahsan ee dejimaha iyo waxa ka kooban aaladda
Ogaanshaha qalabka lumay
Waxqabadka iyo si aan kala sooc lahayn u ah ilaha nidaamka
Soo dejisan AVG AntiVirus
Faallo ku saabsan AVG AntiVirus
AVG AntiVirus Xirfadaha la xiriira